‘नौवास्ता औद्योगिक क्षेत्र’को निर्माण कार्य द्रुत गतिमा
फागुन ११, बाँके । बैजनाथ गाउँपालिकामा ‘नौवास्ता औद्योगिक क्षेत्र’ निर्माण हुने भएको छ । यसका लागि रू. ६१ करोड विनियोजनसमेत भएको छ । रकम विनियोजनभएसँगै निर्माण द्रुत रुपमा अगाडि बढाइएको छ ।
संघीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका लागि चालू आवमा रू. ६१ करोड खर्च गर्दैछ । बजेटबाट औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा सम्याउने, खाल्टाखुल्टी पुर्ने, प्लट बनाउने लगायतको कार्य हुने छन् । सडक ट्र्याकको सम्भावना र यसका लागि काम पनि चालू आवमा नै बढाउने योजना रहेको छ ।
बैजनाथमा ३३८ बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि भनिएको केही भागमा बस्तीसमेत रहेको छ । समस्याको समाधान अझै हुनसकेको छैन । यस अघि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भइसकेर पनि घरधुरी सर्वेक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा भएको अवस्था रहेको जानकारी दिइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि डीपीआर तयार हुँदा २५९ घरधुरी उक्त क्षेत्रमा पर्ने तथ्यांक संकलन भएको थियो । स्थानीय घरधनीको संघर्ष समितिले सो संख्या झण्डै दोब्बर रहेको दाबी गर्दै आएको छ । अहिले भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी आयोगको काम स्थानीय तहले गर्दै आएको छ ।
‘औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको एकीन तथ्यांकका लागि अहिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरिहेका छौं’, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख पुनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत भूभागमा मात्रै समस्या हो ।’
औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि २५० उद्योगीले आवेदन दिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र बन्न लागेपछि रोजगारी पाउने आशामा स्थानीय खुशी भएका छन् । रासस
सम्झौता भएको १५ वर्षपछि निर्माण शुरु भयो नेपालगञ्ज नाकामा एकीकृत भन्सार चौकी [२०७७ फागुन, १६]
८ ओटा नयाँ म्युचुअल फण्ड सञ्चालनमा आउँदै, ७६ करोड इकाई पाइपलाइनमा
बैंक अफ काठमाण्डूको विशेष साधारण सभा चैत ३ गते